IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » IDM နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » IDM နှင့် ဖြေရှင်းနည်း
By သန့်ဇင်ဌေး1:17 PM23 comments
Gallent boyZ December 17, 2011 at 2:38 PM
ဟီးဟီး ၊ အကို က ကျောင်းဆရာ လုပ်ရမှာ အခုအချိန်လောက်ဆို ကျောင်းအုပ် ဖြစ်နေလောက်ပြီ ။ ဟီးဟီ့၊ စတာပါ အကို ၊ မသိတဲ့ သူတွေအတွက် ကွင်းကွင်း ကွက်ကွက် မြင်သွား တယ် ထင်တယ်
အကို ၊ အကို့ရဲ့ စေတနာ ကို အရမ်း လေးစား ပါတယ် ၊ အကို့ အချိန်အရမ်းပေးလိုက်ရမယ်နဲ့ တူတယ်
မသိတဲ့ သူတွေ အတွက် ရော သိတဲ့ သူတွေ အစား ကျွန်တော် က ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါ့ရစေ ခင်ဗျာ့ ၊ Gallentboyz™
မီးပွတိုကျ December 18, 2011 at 12:39 AM
phone win December 18, 2011 at 8:29 AM
ndela January 10, 2012 at 11:48 PM
by the way! wth means OS?
Anonymous February 27, 2012 at 9:27 PM
ကျွန်တော် MMITD မှာ 6.07 ကတည်းက အော် နေတာ ပါဗျာ ..
serial ကို ဖြည့်လိုက်ရင် fake ပြနေလို့ ... ဘာတွေမှားလို့လဲတော့ မသိတော့ပါဘူးဗျာ
အော်တာတော့ နေ့တိုင်းနီးပါးကို (အချိန်ပြည့်ကို လိုက်ပြီးမေးတာ အော်တာ)မရဘူးဗျာ... ...
အဲဒါနဲ့ အကိုဆိုဒ်ကို mmitd က ဘဲတွေ့တော့ ဘာမှ (မလုပ်ချင်သူအတွက်) ..
အခုတော့ဗျာ ကျွန်တော် အရမ်းပျော် ...
အကိုရေ.....အဲနေ့ကတည်းက စာချန်မလို့ပါဘဲ ...ပျင်းနေလို့ ဂျီတော့ပ် အတ်ထားတယ်လက်ခံသေးဘူးနော်
အမြဲတမ်း သတိရနေပါတယ် ဗျာ ...
အားလုံးမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း နေလုံးမှာ အရှေ့အရပ်၌စတင်တောက်လောင်ပြီ
ထင်ထားသည့်အတိုင်း ဖေါက်ထုတ်လိုက်သည့်အခါ စက္ကန့်တံများမှာဖွဲခနဲ
ခြေသံတို့နောက် တစိုက်မတ်မတ် ပြန့်ကျဲမှုနောက်သို့
ဆေးလိပ်တစ်လိပ်သာ ယုံကြည်မှုရှိရှိနှင့် ရှူရှိုက်ချင်တော့တယ်။
ကောင်းကင်မှာ ပါးပါးလေးသာငေးလို့ရမယ့် သက်တံ့ရောင်စုံ ကိုမော့ကြည့်
ဒရွက်တိုက်ဆွဲလာခဲ့တဲ့ ဦးဏှောက်ခွံတစ်လုံး ငါ့မှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း
ပြိန်းဖက်ပေါ်မှာတလက်လက်ထ ချင်လို့ နေရောင်တစ်ပြောက်ကို
အော် နှင်းဆီလှိုင်းတွေ နှင်းဆီလှိုင်းတွေ။
ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း နှောင်းအိမကဗျာ လေးကို ကျေးဇူးစကားကိုယ်စားပါ
Harry April 15, 2012 at 2:13 PM
nyinyi April 21, 2012 at 11:36 AM
ကျနော် internet download manager(6.11)beta full ကိုသုံးပါတယ်.ကျနော် download ဆွဲရင် ညာဘက်ထောင့်က file ရဲ့အောက်မှာ file size မပေါပါဘူး..download ဆွဲတော့လည်း file size ကမတက်လာပါဘူး..
နေမင်းမောင် April 21, 2012 at 12:42 PM
akaiakai508 July 1, 2012 at 6:34 PM
Thunder bolt July 26, 2012 at 12:09 AM
Zay Yer Hein August 28, 2012 at 10:17 AM
All links can not work
please help , brother
please help, brother
all links are dead ready.
soe phyae April 9, 2013 at 1:34 AM
yml September 28, 2015 at 8:14 PM
Link အားလုံးဒေါင်းရတာ အဆင်မပြေဘူး ....up date ဖြစ်အောင်